အဆိုတော် Jessie J နဲ့ တွဲခုတ်နေပြီဆိုတဲ့ မင်းသား Channing Tatum
16 Nov 2018 . 10:12 AM
ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ဗလတောင့်တောင့်နဲ့ မင်းသား Channing Tatum ကတော့ သူနဲ့ အဆိုတော် Jessie J တို့ တွဲခုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို အတည်ပြုလိုက်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အဂါင်္နေ့ညက Channing ဟာ Jessie J ရဲ့ လန်ဒန်မြို့၊ Royal Albert Hall မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲရဲ့ ဖော်ပြပြီး “This woman just poured her heart out on stage at the Royal Albert Hall. Whoever was there got to witness something special. Wow.” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ အတူတူ တင်ခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကြီးနှစ်ယောက်စတင်ဒိတ်ပြီဆိုတည်းက Channing ဟာ Jessie ရဲ့ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေပွဲတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လိုက်အားပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သတင်းတွေအရ “သူဟာ Jessie J နဲ့ အတူတူရှိနိုင်သမျှ ရှိဖို့ အချိန်တွေ ပေးနေပြီး ပျော်နေပုံလည်း ရပါတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ Jessie J ဟာ အဲ့ဒီနေ့ည ပွဲမှာပဲ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ဝေမျှခဲ့ပါသေးတယ်။ Jessie J ဟာ ကလေးမရနိုင်ဘူးလို့ သိရပြီး ဒီအကြောင်းကို သူက ပွဲမှာ ” ရှင်တို့ စာနာဖို့သက်သက်အတွက် ဒီအချက်အလက်ကို ဝေမျှတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်မဟာ ဒီလို ဖြစ်တဲ့ လူတွေထဲက လူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်ယောက်ကများ ဒီလို အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြုံရတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးတစ်ယောက်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးရတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ် သတိရပေးပါ၊ ဒီဝေဒနာကို တစ်ယောက်တည်းခံစားနေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ ဒီသီချင်းကို ဆိုနေတိုင်း ရှင်တို့အကြောင်းကို သတိရနေမှာပါ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း Channing က Post လေး တင်ပြီး သူ့ ကောင်မလေးကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Channing Tatum ရဲ့ ဇနီးဟောင်း Jenna Dewan ဟာလည်း အဆိုတော်မင်းသား Steve Kazee နဲ့ တွဲခုတ်နေပြီး ပျော်ရွှင်နေပုံရပါတယ်။
Source : cnn.com, eonline.com
အဆိုတျော Jessie J နဲ့ တှဲခုတျနပွေီဆိုတဲ့ မငျးသား Channing Tatum
ရုပျဖွောငျ့ဖွောငျ့ ဗလတောငျ့တောငျ့နဲ့ မငျးသား Channing Tatum ကတော့ သူနဲ့ အဆိုတျော Jessie J တို့ တှဲခုတျနတေယျဆိုတဲ့ သတငျးကို အတညျပွုလိုကျပုံပျေါပါတယျ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ အဂါင်္နညေ့က Channing ဟာ Jessie J ရဲ့ လနျဒနျမွို့၊ Royal Albert Hall မှာ ပွုလုပျတဲ့ ဖြျောဖွပှေဲရဲ့ ဖျောပွပွီး “This woman just poured her heart out on stage at the Royal Albert Hall. Whoever was there got to witness something special. Wow.” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ အတူတူ တငျခဲ့ပါတယျ။
နာမညျကွီးနှဈယောကျစတငျဒိတျပွီဆိုတညျးက Channing ဟာ Jessie ရဲ့ လှညျ့လညျဖြျောဖွပှေဲတှကေို တတျနိုငျသလောကျ လိုကျအားပေးလရှေိ့ပါတယျ။ သတငျးတှအေရ “သူဟာ Jessie J နဲ့ အတူတူရှိနိုငျသမြှ ရှိဖို့ အခြိနျတှေ ပေးနပွေီး ပြျောနပေုံလညျး ရပါတယျ”လို့ ဆိုပါတယျ။
နောကျထပျသတငျးတဈခုကတော့ Jessie J ဟာ အဲ့ဒီနညေ့ ပှဲမှာပဲ သူ့ရဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာအခကျြအလကျကို ဝမြှေခဲ့ပါသေးတယျ။ Jessie J ဟာ ကလေးမရနိုငျဘူးလို့ သိရပွီး ဒီအကွောငျးကို သူက ပှဲမှာ ” ရှငျတို့ စာနာဖို့သကျသကျအတှကျ ဒီအခကျြအလကျကို ဝမြှေတာ မဟုတျပါဘူး၊ ကြှနျမဟာ ဒီလို ဖွဈတဲ့ လူတှထေဲက လူတဈယောကျပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ တဈယောကျယောကျကမြား ဒီလို အခွအေနမြေိုးတှကွေုံ့ရတာ ဖွဈဖွဈ၊ ကလေးတဈယောကျယောကျကို ဆုံးရှုံးရတာမြိုး ဖွဈဖွဈ သတိရပေးပါ၊ ဒီဝဒေနာကို တဈယောကျတညျးခံစားနရေတာမဟုတျဘူးဆိုတာနဲ့ ဒီသီခငျြးကို ဆိုနတေိုငျး ရှငျတို့အကွောငျးကို သတိရနမှောပါ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ဒါကွောငျ့လညျး Channing က Post လေး တငျပွီး သူ့ ကောငျမလေးကို ခြီးကြူးဂုဏျပွုခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Channing Tatum ရဲ့ ဇနီးဟောငျး Jenna Dewan ဟာလညျး အဆိုတျောမငျးသား Steve Kazee နဲ့ တှဲခုတျနပွေီး ပြျောရှငျနပေုံရပါတယျ။